Nzira yekudzivirira sei vhudzi kubva pamagetsi nguva yekuoma? | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » General Tsika » Nzira yekudzivirira sei vhudzi kubva pamagetsi nguva yekuoma?
Pane dzimwe nguva mukadzi wese anosiya vhudzi rake kuti riome ega. Nekudaro, kana bvudzi racho rikachinjirwa, mhedzisiro yacho ndeye kusakwana zvachose. Zvinokwanisika here kuti bvudzi harigadzirwe magetsi parinenge raoma? Muchokwadi, aya matipi anogoneka…
Iwe haufungi kuti bvudzi rako risina bvudzi rakachena? Kana iwe wakashambidza vhudzi rako zuro, iwe unoda shampoo zvakare nhasi? Paunenge wanyanya shampoo, iwo mafuta echisikigo muvhudzi rako anodzikira uye bvudzi rako rinova remagetsi.
Shandisa mashoma matauru
Kuedza kuoma bvudzi netauro ndechimwe chezvinhu zvikuru zvinokonzeresa magetsi. Iro basa rekushandisa thauro kubvisa mvura yakawandisa kubva kubvudzi. Mushure mekushambidza, nyorovera zvinyoro-nyoro mvura kubva patambo.
Kana zvasvika pakugadziriswa kwemagetsi, iyo bvudzi bvudzi rinogona kuve muvengi wako mukuru. Iwe unofanirwa kusanganisa bvudzi rako mubhavhu kana mushure mekugeza kuti udzivise bvudzi kubva mukutenderera.
Shandisa isina-kugeza kirimu
Imwe yedzakanakisa nzira dzekudzivirira magetsi ndeyekushandisa isiri-yekushambidza conditioner. Isa bvudzi rinogadzirisa pasi nekusanganisa bvudzi. Usazvipfuure kana iwe usingade kuti vhudzi rako riwone rine oiri uye rinorema.
Ratidza kufarira kwakakosha
Kuomesa uye kupwanya kunotanga kumagumo ebvudzi. Saka iwe unofanirwa kutora hanya yakawedzera yebvudzi rako rinopera. Anti-electrization zvigadzirwa kana zvakasikwa zvigadzirwa semafuta ekokonati zvinogona kushanda kumicheto yebvudzi. Iwe unofanirwawo kuti fractures yako ibviswe kazhinji.
KUFUNGA IZVI: TANZIMAT FERMANI
Kuyemura muGermany (Die interjektion)